‘स्वास्थ्य निर्देशक शर्माको लापरवाही’कै कारण मनाङमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प – Tandav News
‘स्वास्थ्य निर्देशक शर्माको लापरवाही’कै कारण मनाङमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७७ भाद्र १० गते बुधबार १३:१३ मा प्रकाशित
स्वास्थ्य निर्देशनायलका गण्डकी प्रदेशका निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माको लापरवाहीको कारण मनाङमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ । एक मात्रै डाक्टरले सेवा दिदै आइरहेको जिल्ला अस्पताल मनाङमा तिनै डाक्टर कोरोना भाइरस संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेपछि स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको हो ।
अहिले मनाङ जिल्ला अस्पताल शिल गरिएको छ । एक जना डाक्टर भएको परिणाम देखिएको अस्पतालका प्रमुख रहमत अन्सारीले ताण्डव न्यूजलाई बताए । ‘हामीले ७ दिनको लागि अस्पताल शिल गरेका छौ, यदी मनाङ अस्पलातमा दुई जना भन्दा धेरै डाक्टर हुन्थे भने शिल गर्नु पर्ने स्थिती हुदैन्थ्यो,’ अन्सारीले भने, ‘दुई जना मात्र डाक्टर भएको भए हामीले जिम्मेवारी वाडेर काम गथ्र्यौ । एक जना कन्टे«क टे«सिङमा परे अर्कोले अस्पताल धान्ने काम गथ्र्यो । अहिले मनाङमा ४ जनालाई कोरोना देखिएको छ । ’
जनशक्तिको अभाव भएको हुनले यस्तो परिस्थिती आएको अन्सारीको भनाई छ । ‘यहाँ रहेको दुई जना डाक्टर मध्ये डा प्रविन घिमिरेलाई निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले सरुवा गरेर पोखरा लगे, अहिले डा. घिमिरे भएको भए यो अवस्था आउने थिएन्,’ उनले भने, ‘ जनशक्तिको अभाव छ भन्ने कुरा डा. शर्मा जानकार हुदा समेत वास्ता छैन । अब अस्पतालनै एक हप्ताको लागि बन्द गर्नुपर्ने भयो ।’
स्वास्थ्य निर्देशक शर्माले मनाङ अस्पताललाई वेवास्ता गरेको कारण अहिले समस्या देखा परेको एक स्वास्थ्यकर्मीले नाम नबताउने शर्तमा बताए । ‘शर्माले जहाँ जनशक्ति कम छ त्यहाँ भएका डाक्टर तान्ने हो कि थप्ने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कोरोनाको वेलामा गफ मात्र दिदै बस्ने हो की जनशक्ती र आवश्यक सामाग्री तयार पारेर जिल्ला जिल्ला पठाउने हो ?’
हाल जिल्ला अस्पतालमा सबै गरी ४ जना कर्मचारी रहेको प्रमुख अन्सारीले बताए । प्रमुख अन्सारी, डाक्टर सन्तोष अधिकारी, नर्स विना पौडेल र ल्याबमा करार कर्मचारी प्रकाश रोक्का छन् ।
मनाङ अस्पताल शिल भए नभएको अहिले आफुलाई जानकारी नभएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निर्देशक विनोदविन्दु शर्माले बताए । ‘हिजोसम्म शिल गर्ने भन्ने कुरा आएको थिएन्, ओपिडि सेवा वन्द गरेर इमर्जेन्सी सेवा चलाउने भन्ने थियो, नयाँ अपडेट लिन पाएको छैन् ।’
नेपाल एयरलाइन्सलाई ‘मस्ट पपुलर एयरलाइन्स अवार्ड’